Mahery Vaika Ny Fanafihan’ny Polisy Shinoa Ireo Mpanao Hetsika Nanohitra Ny Fampidirana Am-ponja Ny Filoha Voafidin’ny Tanànakely Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2016 9:25 GMT
Sariitatra ara-politika nataon'i Badiucao voatokana ho an'ny mponina Wukan izay efa niady hiaro ny taniny nandritra ny taona maro.
Nanapoaka bala fingotra sy baomba mandatsa-dranomaso tamin'ny mpanao fihetsiketsehana tao Wuhan, tanànakelin'ny mpanjono any amin'ny faritany atsimo atsinanan'i Guangdong Shinoa, izay efa nanao hetsika nandritra ny telo volana manohitra ny fisamborana sy ny didim-pitsarana vao haingana an'ilay lehiben'ny tanànakely voafidy Lin Zuluan, ny polisy.
Nosamborina i Lin tamin'ny 18 Jona raha mbola teo am-pikasana hikarakara hetsi-panoherana eo an-tokotanin'ny fiadidiana ny kaominina Shanwei hanoherana ny fangalana tany izay vao niseho tao Wuhan. Voampanga ho nanao kolikoly, ary voaheloka 37 volana an-tranomaizina izy tamin'ny 8 Septambra .
Mino ireo mponina izay nanao fihetsiketsehana nandritra ny telo volana manohitra ny fisamborana sy ny fampidirana am-ponja an'i Lin fa noterena hiaiky ho nandray kolikoly izy. Mba hanafoanana tanteraka ny fanentanana rehetra, nanidy ny tanàna vao mangiran-dratsy tamin'ny 13 Septambra ny polisy mitam-piadiana manodidina ny 2.000 ary niditra an-keriny tao an-tranon'ireo mpitarika ny tanànakely hisambotra azy ireo. Nanohitra ireo mponina, ary tamin'izany no nitifitra bala fingotra sy baomba mandatsa-dranomaso ny polisy , izay niafara tamin'ny fifandonana mahery vaika.
Nifampizarana imbetsaka tao amin'ny WeChat androany ny lahatsary miavaka tamin'ny fifandonana tao Wukan. pic.twitter.com/fsDW7IJS9v
Naratra noho ny bala fingotra ny mponina am-polony vitsivitsy. Nosamborin'ny polisy ny mponina 13 nolazaina fa andrisika ny hetsi-panoherana. Niparitaka tao amin'ny Twitter ny lahatsary avy amin'ny fakantsary fanarahamaso avy amin'i @beidaijin nahazo ny sarin'ny fomba nidiran'ny polisy an-keriny tao an-tranon'ny olona iray tao an-tanànanakely tao anatin'ny aizina :
Nandritra ny fanaovana bemidina, notànana vonjimaika ny vehivavy sy ny ankizy mpianatra sady nofatorana ny tanan'izy ireo. Naratra ny sasany tamin'izy ireo (lahatsary avy amin'i @beidaijin):
Tsy dia tena hoe tsy nampoizina ny famoretana nataon'ny polisy. Talohan'ny namoahan'ny fitsarana tao an-toerana ny didim-pitsarana an'i Lin, efa nampilaza ny mponina ny mpitandro filaminana avy any Lufeng, distrikam-paritra misy an'i Wuhan ,mba hampitsahatra ny hetsi-panoherana rehetra alohan'ny 10 Septambra raha tsy izany, hotazomina ho tompon'andraikitra ara-pitsarana amin'ny zavatra ataony izy ireo.
Nivoady anefa ny mponina fa hanohy ny fihetsiketsehana manohitra ny fanagadrana an'i Lin. Mampiseho ny mponina sasany mbola mifanandrina amin'ny polisy ny sary eto ambany (efa voafafa ny sary) na dia efa taorian'ny fanafihana aza. Mipetraka manoloana ny sakan'ny manampahefana polisy mitam-piadiana ny iray amin'ireo mponina, lahy antitra, ary nametraka fitoeran'etona fandrehitra teo akaikiny toy ny fampitandremana :
Fonenan'ny mponina 13.000 ilay tanànan'ny mpanjono ary nahasarika voalohany ny fifantohan'izao tontolo izao taorian'ny andianà hetsi-panoherana manohitra ny kolikoly sy ny fangalana tany an-keriny tamin'ny Desambra 2011. Niditra an-keriny sy nibodo ny lapan'ny governemanta ny mponina, ary niditra an-tsehatra hanao fanadihadiana ny governemantam-paritany, tatỳ aoriana nilamina ny fifandirana tamin'ny alalan'ny famelana ny mponina mba hifidy indray izay hitondra ny tanànakely. Voafidy ho filohan'ny tanàna i Lin tamin'ny Martsa 2012. Nomen'ny fampitam-baovao tao an-toerana sy iraisampirenena anarana hoe Maodely Wukan ny famahana olana am-pilaminana tamin'ny fomba demaokratika tao an-toerana .
Saingy tsy mbola voavaha ny olan'ny fakana tany tao an-tanànakely tsy nisy fankatoavana mialoha avy amin'ny manampahefana ao an-toerana sy ny mponina satria any amin'ny dingana ambony any an-drenivohitra sy avy any amin'ny seha-piadidiana ambony kokoa no isian'ny kolikoly. Raha nanomboka ny tetikasam-pampandrosoana ao amin'ny toeram-pambolena miorina ao Wuhan manana velaran-tany 170.000 metatra tsimivadimandry tsy nahazo fanekena avy amin'ny komitin'ny tanànakely ny mpandrafitra tetikasa izay tohanan'ny governemantan'ny tanandehiben'i Donghai dia nihevitra ny mponina tao an-tanànakely fa hanao dingana indray ny manampahefana ao amin'ny faritany. Teo ry zareo no nikasa ny hitsidika ny governemantan'i Shanwei hitondra ny fanangonan-tsonia tamin'ny volana Jona. Nosamborina roa andro monja talohan'ny fanomanana ny hetsi-panoherana i Lin.
Niezaka nanao izay rehetra tratry ny ainy ny manampahefana tao an-toerana mba hisorohana ny hetsi-panoherana tsy hahasarika saina be loatra. Nahazo toromarika ny sehatra fampitam-baovao tao an-toerana mba tsy haka ny vaovao any an-toerana; na sary na lahatsoratra momba ny famoretana dia nolazaina fa tsaho sy nofafana haingana tamin'ny sehatra media sosialy; nanao fanambarana ofisialy ny polisy tao Lufeng tao amin'ny habaka bilaogy madinika malaza, Weibo, fa voaverina tamin'ny laoniny ny filaminam-bahoaka tao an-tanànakely; ary tsy navela hiditra teo amin'ny manodidina an'i Lufeng ireo mpanao gazety vahiny:
Nanakana ireo mpanao gazety vahiny rehetra ny polisy #Shinoa mba tsy hiditra manodidina akaikin'i #Wukan Nahazo baiko izahay hiala an'i Lufeng na dia tanàna eo amin'ny manodidina aza izany
Amin'ny fanantenana hisarihana ny fifantohana iraisam-pirenena bebe kokoa amin'izay mitranga ao Wukan, niantso hanaovana hetsi-panoherana teo anoloan'ny biraon'ny solontenan'ny manampahefana Shinoa ao amin'ny faritr'i Hong Kong manana fitantanana manokana — dia ny Biraom-Pifandraisan'ny Governemanta Foibe Shinoa — hanoherana ny famoretana, ny Hong Kong Miara-dia ho Fanohanana ny Hetsiky ny Tia Tanindrazana Demokratika ao Shina :
.@HKAA1989 fanomanana hetsi-panoherana amin'ny Alarobia mba hitakiana ny famotsorana ireo olona nosamborina tao an-tanànakely ao #Wukan #乌坎 sy #LinZhuluan pic.twitter.com/8524TYeRan